Ny Gulf Air dia manohy ny sidina avy any Bahrain mankany amin'ny seranam-piaramanidina Moscow Domodedovo
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny Gulf Air dia manohy ny sidina avy any Bahrain mankany amin'ny seranam-piaramanidina Moscow Domodedovo
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Bahrain • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny sidina nasionalin'ny fanjakan'i Bahrain dia mamerina ny sidina mpandeha efa voavoatra mankany amin'ny Federasiona Rosiana.
Ny sidina avy amin'ny tobin'ny rivotra mankany Bahrain dia hiasa isan-kerinandro amin'ny asabotsy sy alatsinainy.
Amin'ny sabotsy, amin'ny 14:05 ny fahatongavana any Domodedovo, amin'ny 14:50 ny fiaingany.
Ny alatsinainy dia amin'ny 07:10 no tonga, ary amin'ny 08:00 ny fiaingana.
Nanomboka tamin'ny 14 aogositra 2021, ny sidina nasionalin'ny fanjakan'i Bahrain dia nanohy ny sidina mahazatra avy tao amin'ny seranam-piaramanidina Moskovo Domodedovo.
Ny sidina avy amin'ny tobin'ny rivotra mankany Bahrain dia hiasa isan-kerinandro amin'ny asabotsy sy alatsinainy. Amin'ny sabotsy, ny fahatongavana any Domodedovo dia amin'ny 14:05, ny fiainganana dia amin'ny 14: 50 *. Ny alatsinainy dia amin'ny 07:10 no tonga, ary amin'ny 08: 00 * ny fiainganana.
Gulf Air sy Moskoa Seranam-piaramanidina Domodedovo dia niara-niasa hatramin'ny 2014. Tamin'ny volana septambra 2017, nampitomboina ny sidina ho isan'andro noho ny fahombiazan'ny làlana. Tamin'ny volana martsa 2019, najanona ny sidina mankany Bahrain noho ny fanidiana ny fifamoivoizana an-habakabaka iraisampirenena noho ny Covid-19. Hatramin'ny nanombohan'ny fiaraha-miombon'antoka tamin'ny seranam-piaramanidina Domodedovo, ny Gulf Air dia nanao hetsika fitaterana sy fitaterana 2,732 ary nitaterana mpandeha 180,000 tamin'ny làlana voatondro.
Tsy manam-paharoa ho an'ny tobin'ny fiaramanidina Moskoa ny zotram-pitaterana an'i Bahrain, ity zotra an'habakabaka ity dia manome toerana maro samihafa amin'ny iray amin'ireo tambajotram-pifandraisana lehibe indrindra any Moyen Orient.
Gulf Air dia orinasam-panjakana ary mpitondra saina amin'ny fanjakan'i Bahrain. Miasa foibe ao Muharraq, ny zotram-piaramanidina dia miasa sidina voatondro ho any amin'ny toerana 52 any amin'ny firenena 28 manerana an'i Afrika, Azia ary Eropa. Ny ivon-toerany lehibe dia ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Bahrain.
* Ny ora fiaingana / fahatongavana dia aseho amin'ny fotoana Moskoa